လ ၂ဝ အတွင်း ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးတွင် အမှုကြီး ရှစ်သောင်းကျော်ကို ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ ဟု?? - Yangon Media Group
လ ၂ဝ တာ ကာလအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းတွင် အမှုကြီးများကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မှုပေါင်း ၈၅ဝဝဝ ကျော်ရှိခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။ လသာမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်ဝင်းနိုင်က မေ ၂၂ ရက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ရာဇဝတ်အမှုကြီး ၁ဝ မျိုးနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ၁.၄. ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှ၊ ၃၁.၁၂. ၂ဝ၁၇ အထိ မည်မျှဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယင်းမှုခင်းများအနက် တရားခံဖော်ထုတ်ရန် ကျန်ရှိမှုခင်းနှင့် ကျန်ရှိအမှုများအား မည်ကဲ့သို့ စုံစမ်းဖော် ထုတ်မည်ဆိုသည်ကို မေးမြန်းခဲ့ရာ ဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီး အောင်စိုးမိုးက အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းဖြေ ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းကာလအတွင်း အမှုကြီး ၁ဝ မျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ ကြိုတင် ကာကွယ်ဖမ်းဆီးနိုင်မှု ၈၅၆၈၅ မှု ရှိခဲ့သဖြင့် အမှုကြီးဖြစ်ပွားမှုနှုန်း လျော့နည်းကျဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ ”ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဆိုရင် လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုး မိုးရေးနဲ့ မှုခင်းကြိုတင်ကာကွယ် ရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြိုကာဖမ်းဆီးမှုတွေလည်း ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ ကြိုကာဖမ်းဆီးမှုမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၁ဝ မျိုးရှိပြီး တော့မှ ဒီတင်ပြပါကာလအတွင်းမှာ ကြိုကာ ၈၅၆၈၅ မှုကို ကြိုတင် ကာကွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ဒီအမှုကြီးတွေမှာ လျော့နည်းကျဆင်းရခြင်းဖြစ် ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်မှ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် အထိ တစ်နှစ်ရှစ်လတာကာလအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ အမှုကြီး ၈၅၆ မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယင်းအနက် မုဒိမ်းမှု ၄၆ဝ နှင့် လူသတ်မှု ၃ဝဝ တို့ပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်း ၈၅၆ မှုအနက် ၈ဝ၆ မှုကို စွဲတင်နိုင်ခဲ့ကာ ၂၄ မှု ပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး လက်ကျန်အမှု ၂၆ မှုသာကျန်ရှိသည့်အတွက် စွဲတင်ရာ ခိုင်နှုန်းမှာ ၉၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းလ ၂ဝ တာကာလအတွင်း ယင်းအမှုကြီး ၁ဝ မျိုးအနက် လက်နက်မှုနှင့် သစ္စာဖောက်ဖျက် မှုနှစ်ခုကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျူးလွန်မှုမရှိခဲ့ဘဲ ကျန်ရှစ် မှုကိုသာ ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးအောင်စိုးမိုးက ”ရပ်ရွာပြည်သူတွေနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်မှု မြင့်တက်လာရင်မှုခင်းများ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရာမှာ ယခုထက် စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမြင့်မားရေးအတွက် ပြည်သူပါ ပူးပေါင်းပါဝင်လာစေရေးအတွက် ပိုမိုစည်းရုံးဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်” ဟုပြောသည်။ ရဲလက်စွဲအပိုဒ် ၁၇၅၄ ပါ အရေးကြီးသောရာဇဝတ်မှုကြီး ၁ဝ မျိုးမှာ လူသတ်မှု၊ ဓားပြမှု၊ လုယက်မှု၊ ပြန်ပေးမှု၊ မုဒိမ်းမှု၊ ဖောက်ထွင်းမှု၊ တိရစ္ဆာန်ခိုးမှု၊ သစ္စာဖောက်ဖျက်မှု၊ လက်နက်မှုနှင့် မတရား အသင်းမှုတို့ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်ကစတင်ကာ ရပ်ရွာအခြေပြုရဲလုပ်ငန်းစနစ်ကို ပြည်သူနှင့်အတူ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။